YEYINTNGE(ကနဒေါ): Wednesday, January 22
တက္ကသိုလ်၇ိပ်သာလမ်း အမှတ် ၄၂ တဏှာရူးများလက်ရှိလွှတ်တော်ဥက္ကဌ မှ ဖြေရှင်းအရေးယူရန်
လွှတ်တော် ဥက္ကဌ လာရှင်းပေးပါ
ဇာတ်လမ်းက သည်လိုစသည်…၂၀၁၀ ခုနှစ် ဂျွန်လလယ်တွင် ကမ္ဘာအေးမှ နေရာကောင်းသော စားသောက်ဆိုင်ကို မြေးတော်ကလေး ဦးသန်းရွှေ မြေးမရ လိုက်လို့ ဆိုင်ကို ၄င်း၏ စွယ်တော် ဂိုဏ်းအဖွဲ့သားများမှ နံနက် ၁၀ နာရီ လူမြင်ကွင်းအလယ်ခေါင်တွင် ၀င်ရောက်ဖျက်ဆီးလေ၏၊ ဖျော်ရည်မကာ လိုင်စင်ရထားသော ဆိုင်ပိုင်ရှင်မှ(…….) မခံနိုင်၍ အမှုဖွင့်မည်လုပ်ခဲ့ရာ လက်ရှိ လွှတ်တော် ဥက္ကဌသား အောင်သက်မန်းမှ ဖေါ်ပြပါ မြေးတော်ကလေးအတွက် တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း တွင် ဆိုင်တခု အလျင်မြန် လုပ်ပေးလေသည်။၄င်းဆိုင်ထဲတွင် ….ဖွင့်စက စားသောက်သူနှင့် အရက်ဘီယာများလောက်သာရသည်…ဆိုင်ဖွင့်ပြီး (၆)လမျှကြာသောအခါ မူးယစ်ဆေးဝါးပါ တွဲ၍ ရောင်းချ၏… သတင်းအရ ရဲအရာ၇ှိတချို့များ ပုံဖျက်ကာ လာရောက်စားသောက်ပြီးနောက်…သတင်းစုံစမ်းကြပြီး သတင်းမှတ်တမ်းတင်သောအခါ မထိရဲမတို့ရဲသော ဆိုင်တခုဖြစ်နေကြာင်း ဖေါ်ပြထားခဲ့ကြ၏။
အကြောင်းမှာ မြန်မာပြည်ပြောင်းလဲရန် ရွေးကောက်ပွဲ လုပ်ပြီးနောက် ယခင် ပုံစံမျိုးစုံတို့ဖြင့် ၀င်ရောက် အချေချထားသော မြောက်ကိုးရီးယား ထောက်လှမ်းရေးများနှင့် ပတ်သက်သည့်အပြင် လွှတ်တော် ဥက္ကဌ ဦးရွှေမန်း၏ သားနာမည်ဖြင့် အမည်ပေါက်သော ဆိုင်ဖြစ်နေရပြီး ဆိုင်၏ အကျိုးမြတ်အားလုံးအား မြေးတော်ကလေးကို ဆက်သနေကြရသည်။
စာရေးသူမှ အဆိုပါ သတင်းများ လိုက်လံစုံစမ်းသည်မှ (၆)လ ကျော်မျှကြာခဲ့သည်…ယခု တက္ကသုိုလ်ရိပ်သာလမ်းတွင်း အိမ်အမှတ် (၄၂) အောက်ထပ်လေးလွှာ အပြင် မြေတိုက်ခန်းပါ အသုံးပြုထားလေသည်။ ၄င်းမြေတိုက်ခန်းထဲတွင် အသက် ၁၅ နှစ်မှ အသက် ၃၀ ၀န်းကျင်ထိရှိသော မိန်းမငယ် မိန်းမရွယ်ပေါင်း ၂၀ ၀န်းကျင်ခန့် ပိတ်လှောင်ထားသည်။
အဆိုပါ မိန်းမငယ်လေးများသည် တဦးတယောက်မှပင် ရန်ကုန်မြို့မှ မဟုတ်ကြပါ..တောနယ်ဒေသ များမှ ဖြစ်သည်ဟုသိရသည်။ ရန်ကုန်သို့ လူပွဲစားပေါင်းစုံဖြင့် လိမ်လည်လှည့်ဖျားခံရ၍ ရောက်ရှိလာကြပြီး ဖေါ်ပြပါ တက္ကသိုလ်ရိပ်သားလမ်း အမှတ်(၄၂) သို့ ရောက်ကြရသည်။ ထိုး အမှတ်၄၂ ဆိုင်တွင် ညပိုင်းမှ လူထင်ပြခွင့်ရကြပြီး စားသောက်သူ တဏှာရူးများအား ဖျော်ဖြေပေးရ၏…တပ်မတော်မှ အရာ၇ှိကြီးများကိုယ်တိုင်ပင် ညအချိန်မတော် ထိုဆိုင်သို့လာကာ အပမ်းဖြေကြပြီး ..နံနက်အာရုံဦးမှ အိမ်သို့ပြန်ကြပြီး အိမ်ထောင်ရှင် အမျိုးသမီးများအာ ဘုရားတွင် ပုတီးသွားစိတ်နေကြာင်းလိမ်လည်ပြောဆိုထားသည်ကို စာရေးသူမှ သက်သေခံများနှင့် ရ၇ှိထားသည်။
စာရေးသူ စီစဉ်ပေး၍ လူကုန်ကူးခံရသော င်္ဟသတ မြို့နယ်မှ (၉)တန်းကျောင်း မ(..) နှင့် ၄င်း၏ ကျောင်းနေ သူငယ်ချင်း ၉ တန်းကျောင်းသူ(မ….)တို့အား လူပျောက်ဆုံးကြောင်း င်္ဟသတ အမှတ်(၁) ရဲစခန်းတွင် သွားရောက် တိုင်ကြားသော်လည်း (၂)ပတ်ကျော်သည့်တိုင် ဘာမှ မသိရ၍ လူပျောက်သူများ၏ ဆွေမျိုးသားချင်းများမှ စာရေးသူနှင့် အဆက်သွယ်၇ှိသော ရန်ကုန်တွင် နေ့စားကျပန်း အလုပ်လုပ်ကိုင်နေသူတို့အား အကူညီတောင်းခံခဲ့ကြပြီး ၄င်းတို့မှ တဆင့်စာရေးသူအားအကြောင်းကြားခဲ့သောကြောင် ၀ိုင်းဝန်း ခြေရာခံရန် စာရေးသူနှင့်ချိပ်ဆက်ထားသော ရန်ကုန် အလွတ်တန်း သတင်းထောက်လူငယ်များ စုံစမ်းကြရာ ပျောက်ဆုံးသူ င်္ဟသတ မှ (၉)တန်းကျောင်းသူလေး (မ…)အား မှော်ဘီ …ရပ်ကွက်တွင် သိုဝှက်ထားပြီး အခြားတယောက်မှာ စာရေးသူဖေါ်ပြခဲ့သော တက္ကသိုလ်၇ိပ်သာလမ်း အမှတ် ၄၂ သို့ ပို့ဆောင်လိုက်သောကြောင့် မှော်ဘီ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်၏ လူငယ်များပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဖြင့် ကျန်၇ှိနေသော ၉(တန်းကျောင်းသူ မ…)အား ရပ်ကွက်အာဏာပိုင်များနှင့် ပူးပေါင်းကာ ဘေးဒုက္ခမရောက်ခင် ကယ်တင်နိုင်ခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါ အကြောင်းရင်းအား စာရေးသူကိုယ်တိုင်အား မေးမြန်းတင်ဆက်ထားသော ဘီဘီစီမှ အမေ့ခံပုံရိပ် ထုတ်လွှင့်ချင်တွင် အသေးစိတ် တတ်နိုင်သလောက် တင်ပြထုတ်လွှင့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါသည်။ စာရေးသူတို့ ဆုံးရှုံးသွားရသော ကျန်တယောက်သည် အဆိုပါ တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်း အမှတ် ၄၂ ဆိုင်တွင် ရောက်ရှိပြီး လိင်ကြေးကျွန်ဖြစ်နေကြောင်းသိရပြီး ဆက်လက် ကျိုးစားသော်လည် အကောင်းကြီးများမှ အကာကွယ်ပေးထားသော ကြောင့် ရှေ့ဆက်တိုး၍မရဖြစ်နေခဲ့ရ၏။
အကြောင်းမှ အဆိုပါဆိုင်အား လက်ရှိလွှတ်တော် ဥက္ကဌ၏သား ခရိုနီအောင်သက်မန်းမှ မြေးတော်ကလေး စိတ်ဖြေနိုင်ဖို့ လက်ဆောင်အဖြင့် ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့သော်လည်း ယခုအခါ မြောက်ကိုရီးယား ထောက်လှမ်း ဗိုလ်မှူးအဆင့်၇ှိသော ချွန်အင်း မှ ကိုင်တွယ်ဆောင်ရွက်နေမှုအား မြန်မာ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ အသိုင်းဝိုင်းမှ အကာကွယ်ပေး ပျော်ပါးနေကြသောကြောင့် စာရေးသူ ခိုင်လုံစွာတင်ပြသော အကြောင်းရာအား လက်ရှိလွှတ်တော်ဥက္ကဌ မှ ဖြေရှင်းအရေးယူရန် လိုလားကြောင်း သိစေချင်ပါသည်…
ဂိုလ်ရှယ်လေး နှင့် ရန်ကုန် သတင်းလူငယ်များ
BY YeYint Nge ... 1/22/20140comment
အင်ဒိုနီးရှားရှိ မြန်မာသံရုံးကို ဗုံးခွဲရန် အဓိကစီစဉ် ညွှန်ကြားသူ ထောင်ဒဏ် ခုနစ်နှစ်ခွဲ ချမှတ်ခံရ
The Voice Weekly'
ဂျကာတာ၊ ဇန်နဝါရီ ၂၁ ယမန်နှစ်မေလက အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ ဂျာကာတာ မြိုတော်ရှိ မြန်မာသံရုံးကို ဗုံးခွဲ တိုက်ခိုက်ရန် ကြိုးပမ်းမှုတွင် အဓိက စီစဉ် ညွှန်ကြားခဲ့သူကို အင်ဒိုနီးရှား တရားရုံးက ထောင်ဒဏ်ခုနစ်နှစ်ခွဲ ချမှတ်လိုက်ကြောင်း အင်ဒိုနီးရှာနိုင်ငံထုတ် Jakarta Post သတင်းစာတွင် ဖော်ပြထားသည်။ အင်ဒိုနီးရှားရှိ မွတ်ဆလင် အစွန်းရောက် အကြမ်းဖက်သမားတစ်စုက ၂၀၁၃ ခုနှစ် မေလတွင် မြို့တော်ဂျကာတာရှိ မြန်မာသံရုံးကို ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်ရန် ကြိုးပမ်းစဉ် အင်ဒိုနီးရှား ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးရမိခဲ့သည်။ အဆိုပါ အကြမ်းဖက် လူတစ်စုတွင် အင်ဒိုနီးရှားရှိ မြန်မာသံရုံးကို ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်ရန် ကြိုးပမ်းရာတွင် အဓိက စီစဉ်ညွှန်ကြားခဲ့သူ အသက် ၂၃ နှစ်အရွယ် ဆီဂီအင်ဒရာဂျီ (Sigit Indrajit) ဆိုသူကို အင်္ဂါနေ့ (ဇန်နဝါရီလ ၂၁) တွင် တောင်ပိုင်း ဂျကာတာ တရားရုံးက ထောင်ဒဏ်ခုနစ်နှစ်ခွဲ ချမှတ်လိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ထောင်ဒဏ် ခုနှစ်ခွဲ ချမှတ်ခံခဲ့ရသူ ဆီဂီအင်ဒရာဂျီသည် တရားရုံးတွင် အမှုစစ် ဆေးခံနေစဉ်တွင် ၎င်း၏လုပ်ရပ်နှင့် ပတ်သက်၍ ဝမ်းနည်းသည့် အရိပ်အယောင် မတွေ့ရဘဲ၊ မကြာခဏ ပြုံးနေလေ့ ရှိကြောင်း အဆိုပါသတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။ အစ္စလာမ်၏ ရန်သူများကို ဆက်လက် တိုက်ခိုက်သွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ဆီဂီအင်ဒရာဂျီက ထောင်ဒဏ်ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခံရပြီးနောက် အေဖက်ပီသတင်းဌာနကို ပြောကြားသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သော ဘင်္ဂါလီများနှင့် မြန်မာတို့ အကြားပဋိပက္ခနှင့် ပတ်သက်၍ လက်စားချေလိုသောကြောင့် ယခုကဲ့သို့ အင်ဒိုနီးရားရှိ မြန်မာသံရုံးကို ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်ရန် ကြံစည်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း အဆိုပါ အကြမ်းဖက်သမားများက ယခင်အမှုစစ်ဆေးစဉ်က ဝန်ခံ ပြောကြားထားသည်။ ထို့အတူ ယမန်နှစ်မေလက မြန်မာသံရုံး ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်ရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သူ တစ်ဦးဖြစ်သည့် အသက် ၂၂ နှစ်အရွယ် အာကမန် တာအူဖီ (Achmad Taufi) ကိုလည်း ဇန်နဝါရီလ ၆ ရက်နေ့က ထောင်ဒဏ် ခုနစ်နှစ်ခွဲ ချမှတ်ခဲ့ကြောင်း CNA သတင်းတွင် ဖော်ပြထားသည်။ အင်ဒိုနီးရှားရှိ မြန်မာသံရုံးကို ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်ရန် ကြိုးပမ်းသူများသည် အင်ဒိုနီးရှားရှိ မွတ်ဆလင် အစွန်းရောက် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်သော Negara Islam Indonesia (အင်ဒိုနီးရှား အစ္စလာမ္မစ် နိုင်ငံတော်) အဖွဲ့၏ ဆက်စပ်နေသူများ ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ဗုံးခွဲတိုက်ခိုက်ရန် ကြိုးပမ်းမှုသည် အင်ဒိုနီးရှား မွတ်ဆလင် အစွန်းရောက် ခေါင်းဆောင် အဘူဘာကာဘာရှီယာ (Abu Bakar Bashir) က ထောင်တွင်းမှနေ၍ မြန်မာနိုင်ငံကို သွားရောက် တိုက်ခိုက်ရန် လှုံဆော်ပြောကြားခဲ့ပြီးနောက် ဖြစ်ပွားခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။ အဘူဘာကာဘာရှီယာသည် မွတ်ဆလင် အစွန်းရောက် အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်သည့် ဂျမားအစ္စလာမီးယား အကြမ်းဖက် အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီး ၎င်းအဖွဲ့ဝင် အချို့သည် နိုင်ငံခြားသား အများအပြား သေဆုံးခဲ့သော လူ ၂၀၂ ဦးသေဆုံးခဲ့သည့် ဘာလီကျွန်း ဗုံးခွဲမှုတွင် ကျူးလွန်ခဲ့သူများ ဖြစ်သည်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် ကမ္ဘာ့ မွတ်ဆလင်အများစု နေထိုင်ရာနိုင်ငံဖြစ်ပြီး၊ အများစုမှာ အရှေ့အလယ်ပိုင်းနှင့် တောင်အာရှနိုင်ငံများရှိ မွတ်ဆလင် နိုင်ငံများလောက် ဘာသာရေး တင်းကျပ်မှုမရှိဘဲ သဘောထား အလယ်အလတ်ရှိသော မွတ်ဆလင် အများစုရှိရာနိုင်ငံ ဖြစ်သည်။ သို့သော် အနည်းငယ်သော မွတ်ဆလင် အစွန်းရောက်သမားများမှာလည်း နှစ်ပေါင်း များစွာကပင် ရှိနေကြပြီး လွန်ခဲ့သော ၁၅ နှစ်အတွင်း ကမ္ဘာ့ မွတ်ဆလင် အကြမ်းဖက် လှုပ်ရှားမှုနှင့်အတူ ပြန်လည် ခေါင်းထောင်လာခြင်း ဖြစ်သည်။
ငွေလိမ်သူမှာ ပါတီဝင်သာဖြစ်ပြီး စရဖမှ ဖုန်းကို ကိုင်ထားသည်
ရွှေလင်ဗန်း ၆ကွေ့ရှိနေအိမ်ဖျက်ဆီးခံရသူများ ပြောင်းရွှေ့စရာ နေရာအခက်အခဲကြုံနေ
လှိုင်သာယာ ရွှေလင်ဗန်း ၆ကွေ့ရှိ ကျူးကျော်တဲ ၁၂၀၀ ၀န်းကျင်ကို
နံနက် အစောပိုင်း ဖယ်ရှားမှု ပြုလုပ်ခဲ့၊
နေအိမ်ဖျက်ဆီးခံရသူများ ပြောင်းရွှေ့စရာ နေရာအခက်အခဲကြုံနေ
သန်းခေါင်စာရင်းအတွက် ဖြည့်ဖို့ကုလားတွေ ဝေနေတဲ့စာရွက်တွေ
သာကေတ၊ ဒေါပုံ၊ ဒလ တွေမှာ သန်းခေါင်စာရင်းအတွက် ဖြည့်ဖို့ လက်သိပ်ထိုး ကုလားတွေ ဝေနေတဲ့စာရွက်တွေ....
သူတို့ အမျိုး အချင်းချင်း ဘယ်လောက် သိတတ်သလဲ..ဘယ်လောက် စည်းလုံးသလဲ...အောက်က လူတွေကလည်း အထွန့် မတတ်ဘူး...လိုက်နာတယ်...
အမျိုးသားဒီမိုက ရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပညာရေးကွန် ရက်မှ ထောက်ပံ့ကြေးများ စတင်ပေး
22-1-2014 ရက်နေ့ အမျိုးသားဒီမိုက ရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပညာရေးကွန် ရက်မှ
မန္တလေးတိုင်း တနင်္သာရီတိုင်း ရခိုင်ပြည်နယ် မွန်ပြည်နယ် ရှိ ကျောင်းများ သို့
"ဒါလားဟဲ့... အပြောင်းအလဲ" ( ကျော်သူ )
ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါး တရားပွဲလုပ်တယ်။ ဆရာတော်ကြီးက အခု
(ရန်ကုန်)ကိုလှူချင်လို့ တရားပွဲကိုလာပြီးအလှူခံဖို့ အကြောင်းကြားတဲ့
ဒါပေမယ့် လမ်းခုလတ်မှာတယ်လီဖုန်းဝင်လာပြီး "ဦးကျော်သူရေ..
လှူသူတို့ အဖွဲ့ ကိုဘဲလှူရမယ်"လို့ အမိန့် လာပေးတဲ့အတွက်
တွေးမိယုံမှတစ်ပါး...။ ဒါက အရင်ခေတ်။
အခုလာပြန်ပါပြီ...ယခု ပြောင်းလဲပြီလို့ ပြောပြောနေတဲ့ခေတ်။
ဆရာဝန်ကြီးတွေကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံရဲ့ ကျန်းမာရေးချို့ တဲ့နေသောေ
ကျေးလက်ဒေသများကို မေတ္တာရှေ့ ထားပြီးအပင်ပန်းခံကာဆေးဝါး
တစ်နေ့ ကသူတို့ အဖွဲ့ မပြန်ခင် သူတို့ နဲ့ ပါလာတဲ့ပိုလျှံနေသော
ပေးဖို့ ကျွန်တော်တို့ အသင်းရှိ"သုခကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း" ကိုလာရောက်
အဲဒီမှာတင်...သူတို့ နောက်ကို တစ်ကောက်ကောက်လိုက်နေတဲ့
အဲဒီအထက်ကဆိုတဲ့သူက "ခင်ဗျားတို့ကျော်သူ့ အသင်းကို
ကိုလာခွင့်မရှိဘူး"တဲ့ဗျာ။ကိုယ့်ပစ္စည်း ကိုယ်ဘယ်ကိုလှူလှူ ..လှူခွင့်မရှိတဲ့နိုင်ငံ။
ပြည်ပ ပညာရှင်များစိတ်ကုန်သွားမည့်နိုင်ငံ၊ မစ္ဆရိယစိတ်တွေများလွန်းတဲ့နိုင်ငံ၊
ဟန့် တားပိတ်ပင်မှုများနဲ့ လုပ်ကိုင်ပေးနေရတဲ့နိုင်ငံ...စတဲ့ နိုင်ငံအဖြစ်တော့ အဖြစ်မခံလိုပါ။
ပြည်ပနိုင်ငံများရဲ့အထင်အမြင်သေးခံရမည်ကိုမလိုလားပါ။
ဒါကြောင့်မြန်မာပြည်သူလူထုအတွက် စစ်အာဏာရှင် ခေတ်ဆိုးကြီးမှ
ဆိုပါက" ပြောင်းလဲမှုဟူသည် ယူနီဖေါင်းပြောင်းကြယုံနှင့်တော့မရ။
စိတ်ဓါတ်၊ ခံယူချက်၊ဦးတည်ချက်၊ရည်ရွယ်ချက်များပါ ပြည်သူ့ 
အတွက်ဟု မှတ်ကျောက်တင်ကာ သစ္စာဆိုရဲသောပြောင်းလဲမှု
လုပ်နိုင်ဖို့ လိုအပ်ကြောင်းဗြဟ္မစိုရ်တရား(လေးပါး) ကိုလက်ကိုင်
သို့ မှသာ " ဒါမှ...တကယ့်အပြောင်းအလဲ " ဖြစ်ပေတော့မည်။
သတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်မရှိတဲ့ ယနေ့ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာ
Pae Tin Tharn News
မြန်မာနိုင်ငံ၏ သတင်းစာလွတ်လပ်ခွင့်ကို ယနေ့ထုတ် ကြေးမုံသတင်းစာပါ ပဲ့တင်သံဂျာနယ်၏ ကြော်ငြာကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် အကဲဖြတ်နိုင်ပါမည်။
ကေအယ်လ် မြန်မာသံရုံးဘင်ဂလားတွေကိုစီအိုင်ထုတ် ပြည်တွင်းသွင်းနေ
ခုပုံ တွေက မြန်မာသံရုံးကလူတွေ ဘင်ဂလားတွေကို ရပ်ကွက်ထောက်ခံစာအတုတွေ လုပ်ပေးပြီး စီအိုင်ထုတ် ပြည်တွင်းပြန်သွင်းနေတာ..............................
ဒီကောင်တွေကနိုင်ငံသားလားဘယ်သူတွေကထောက်ခံစာေ၇းပေးတာလဲ သံ၇ုံးကကော မျက်စိကန်းနေကြတာလားပြောတော့တစ်မျိုး လုပ်တော့တစ်မျိုး............
ဇန်နဝါရီ ၂၀ ကေအယ်လ်က မြန်မာသံရုံး ဆင်ခြင်ကြပါ စကားနားမထောင်ရင် အနှစ်တွေ ထပ်တင်ပေးဦးမှာ..........................
ခေါင်းမြီးခြုံမတွေ သံမှူးရုံးဘက် ကူးသွားကြတာ ဗွီဒီယိုရိုက်ခိုင်းထားတယ် လူ ၁၀၀၀ နဲ့၃၀၀၀ကြားတဲ့ လုပ်စားကြမှာ အဲ့ကောင်တွေ မြန်မာလိုမတတ်ဘူး စကားပြန်ပါတယ်..............
ကေအယ်လ် မြန်မာသံရုံးနဲ့ဘင်ဂလီများကိစ္စကို ကျွန်တော်သိနေတာ တလတိတိ ရှိပါပြီ။ အကျယ်အကျယ် မဖြစ်ချင်လို့သက်ဆိုင်ရာ သံရုံးက တာဝန်ရှိ လူကြီးမင်းကို အသိပေး သတင်းပေးခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်နေတာ မည်သူ မည်ဝါတွေ ဖြစ်ကြောင်း တိတိကျကျ နာမည်နဲ့တကွ အကြောင်းကြားခဲ့ပါတယ်။ ပုံတွေမှာ မြင်ကြတဲ့အတိုင်း ပိုတောင် ဆိုးလာလို့လူသိအောင် ဖွပါတယ်။ နောင်ဆိုရင် တိုးတိုးတိတ်တိတ် သတိပေးနေချိန်မှာ ကိုယ့်အမှားကိုယ် ပြင်ကြပါ။ အခွင့်အရေး တစ်ခုဟာ နှစ်ခါ လာချင်မှ လာမယ်.....။။
ဓါတ်ပုံ - ၂၀၀၇ ရွှေဝါရောင်တော်လှန်ရေး ကာလအတွင်းက အကျယ်ချုပ်ကျခံနေရသော NLD ခေါင်းဆောင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်မှ တက္ကသိုလ်ရပ်သာလမ်းရှေ့တွင် သပိတ်မှောက်ကံဆောင် မေတ္တာသုတ် ရွတ်ဖတ်ပူဇော်နေသော သံဃာတော်များအား လုံခြုံရေးအစောင့်အရှောက်များကြားမှ ... ထွက် ဖူးမျှော်နေစဉ် ..။
-ကျွန်တော်ဟာ NLD ပါတီဝင် မဟုတ်ပါဖူး။
ဒါပေမဲ့ မဟုတ်တာတွေပြော မမှန်တာတွေရေးနေတာကိုတော့
ဒီအတိုင်းထိုင်ကြည့်နေရလောက်အောင်လဲ မကြောင်သေးပါဖူး။ ဒါကြောင့် မနေနိုင် မထိုင်နိုင် ၀င်ပြောလိုက်ပါရစေ။
ရွှေဝါရောင် တော်လှန်ရေး စစချင်း ၂၅ စက်တင်ဘာ ည မှာ ဖမ်းခံရတဲ့၃၂ယောက်ထဲမှာ NLD ၃၁ ယောက် နဲ့ ကျွန်တော်ပါ။ -
သံဃာတော်တွေကို နေ့စဉ်ဆွမ်းကပ်၊ လမ်းတလျောက် လုံခြုံရေး ယူပေးခဲ့တဲ့ အပြင် မူးမော်လဲသွားတဲ့
သံဃာတွေကိုဆေးလိုက်ကုပေးခဲ့တာ အားလုံး NLD တွေပါပဲ။
ဘယ် တစည ဘယ် ကြံ့ခိုင်ရေးမှ မပါပါဖူး။
ခုမှ သံဃာနဲ့ NLD ထိပ်တိုက် မတွေ့ စေနဲ့ လို့ ပြောနေကြတာတွေကိုနားမလည်ပါဖူး။
ပြောနေတဲ့ လူအားလုံး ကို မေးချင်တယ်။
ရွှေဝါရောင် ကာလတုန်းက(ခင်ဗျားတို့ ဘာတွေ လုပ်နေခဲ့ကြလဲ)။
NLD ကတော့ သူ့တာဝန် သူကျေခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ရဲရဲကြီး အာမခံတယ်။
ဒကာရယ် လို့ ပြောမိလို့ဘာ ဒကာ လဲ ဆိုပြီး နားရင်းအုပ်ခံရတာ မဂ္ဂင် ဆရာတော် ပါ။
ဖြောင့်ချက် မပေးရင် (ကန်တော့ပါရဲ့ ) ဖင်ချမယ် ဆိုပြီး ၀ိုင်းချုပ်ခံရတာ မစိုးရိမ်တိုက်ကျောင်းက ဆရာတော်။
ထောင်ထဲမှာ ဘုန်းကြီး မရှိဖူး။ဆွမ်း မရှိဖူး။ လိုချင်ရင် ဒါပဲ ရမယ် ဆိုပြီး ဆဲ ခံရတာ မေဒိနီ ဆရာတော်။
အဲဒါတွေ လုပ်ခဲ့ ဆဲခဲ့ ကြတာ NLDတစ်ယောက်မှ မပါဖူး။
ကြည့်ကျက် ရေးကြပြောကြစမ်းပါဗျာ။ အာရုံနောက်လွန်းလို့ ။
(( Maung Thura ခေါ် ကိုဇာဂနာ ))
တက္ကသိုလ်၇ိပ်သာလမ်း အမှတ် ၄၂ တဏှာရူးများလက်ရှိလွှတ်ေ...
အင်ဒိုနီးရှားရှိ မြန်မာသံရုံးကို ဗုံးခွဲရန် အဓိကစီ...
ငွေလိမ်သူမှာ ပါတီဝင်သာဖြစ်ပြီး စရဖမှ ဖုန်းကို ကိုင...
ရွှေလင်ဗန်း ၆ကွေ့ရှိနေအိမ်ဖျက်ဆီးခံရသူများ ပြောင်းေ...
သန်းခေါင်စာရင်းအတွက် ဖြည့်ဖို့ကုလားတွေ ဝေနေတဲ့...
အမျိုးသားဒီမိုက ရေစီ အဖွဲ့ချုပ် ပညာရေးကွန် ရက်မှ ...
ကေအယ်လ် မြန်မာသံရုံးဘင်ဂလားတွေကိုစီအိုင်ထုတ် ပြည်တ...